Laptọọpụ inch 15 kacha mma nke 2022: echiche, ntuziaka na ndị ọzọ
Ọ bụ ezie na ọchịchọ maka Ultrabooks ebiliwo nke ukwuu na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ka na-amasị ọkọlọtọ size laptọọpụ ka ị nwee ike ijikwa ọrụ gị kwa ụbọchị n'enweghị nsogbu, ebe ọ bụ na ihuenyo ha buru ibu ma dị ike karị. Agbanyeghị, o doro anya na ọ dịghị onye ga-eche na ị ga-enweta akụrụngwa dị gịrịgịrị ma dị mfe, ma ọ bụrụ na ọ na-egbo mkpa gị niile ma dị n'ime mmefu ego gị..
Ma ebe a ka akụkọ a na-abata. Na Anyị na-akwado laptọọpụ inch 15 ọkacha mmasị anyị.
1 Laptọọpụ inch 15 kacha mma
2 Ụdị nke laptọọpụ inch 15
2.1 Onu ahia
2.3 Ịgba Cha Cha
3 Laptọọpụ inch 15 nke ị kwesịrị ịzụta ...
3.8 14-inch na 15-inch LG Gram
4 Uru nke 15-inch vs 13-inch kọmputa
5 15-inch vs 17-inch laptọọpụ
6 Kedu ihe kwesịrị ịnwe ezigbo laptọọpụ inch 15?
6.1 I5 ma ọ bụ i7 processor
6.2 Ngosipụta Full HD
6.4 Onwe ya
7 Nleta nke laptọọpụ inch 15
8 Ụdị laptọọpụ inch 15 kacha mma
9 Mkpebi gbasara laptọọpụ inch 15
Laptọọpụ inch 15 kacha mma
Iji mee ka ọ dịrị gị mfe ịhọrọ 15 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ, Anyị emeela tebụl ntụnyere na ụfọdụ ụdị kachasị mma nke a na-ere taa na nke nwere ntọala siri ike nke ndị ọrụ nwere obi ụtọ na ịzụrụ. Naanị ị ga-ahọrọ nke kacha amasị gị:
Ndepụta ọkọlọtọ-size Ultrabooks etoola nke ukwuu n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ya mere enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu Laptop 14 inch na 15 sentimita kwesịrị nlebara anya gị na ego gị. Nke a na-eme ka ịchọta ihe Laptop 15 inch zuru oke maka gị abụghị kpọmkwem ihe dị mfe na maka nke ahụ anyị edewo akwụkwọ a, iji nyere gị aka ịchọta ya. Iji mee ka ndụ gị dịkwuo mfe, anyị ekewala nhọrọ ndị dịnụ na ngalaba dị iche iche nwere onyinye kacha pụta ìhè na ịntanetị.
Ụdị nke laptọọpụ inch 15
Dị ka ọ dị n'akụkọ ọ bụla ọzọ, kọmputa dị inch iri na ise dị ọnụ ala karịa. N'ime ndị dị ọnụ ala, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ndị nwere ọnụ ahịa ihe karịrị € 15, mana ha na-abụkarị akụrụngwa nke njirimara kachasị mkpa bụ nha ihuenyo. Iji malite kọmpụta ihuenyo ọkọlọtọ-size (nnukwu) n'ọnụ ahịa mbelata, ndị esịtidem components ga-enwe akọ, nke na-asụgharịkarị n'ime ngwa ngwa ngwa ngwa, obere RAM karịa ka akwadoro, HDD-naanị diski na, eleghị anya, ụfọdụ njedebe ndị ọzọ, dịka nke m nwere nke na-agụnyeghị nkwado maka 5GHz WiFi.
O yikarịrị ka nke ahụ Ihuenyo nwere mkpebi dị ala, nke na-eme ka ihe niile dị ka ibu ma ka anyị ghara iji ohere nke nwere ike igosi ọdịnaya ndị ọzọ. Na nkenke, ihe anyị ga-enweta ma ọ bụrụ na anyị azụta kọmpụta dị inch 15 dị ọnụ ala ga-abụ kọmpụta nwere uche nke nwere ihuenyo ka ukwuu.
N'ime kọmputa 15-inch anyị nwere ike ịhụ ìhè, mana ole na ole ma ọ bụ ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha ka a na-ewere dị ka ultrabook. Kọmputa dị fechaa bụ nke na-atụ ntakịrị maka ihe ọ gaara abụ, n'otu akụkụ n'ihi atụmatụ sara mbara nke na-eme ka ọ dị gịrịgịrị. Kọmputa dị inch iri na ise dị fechaa kwesịrị ịdị ihe dị ka kilogram 2. Ma ọ bụrụ na ọ daa n'okpuru 1.5kg, ihe anyị ga-enwe bụ laptọọpụ inch 15 nke enwere ike iwere ya dị ka ultrabook. Ọ bụghị ihe a na-emekarị, mana ọ gaghị ekwe omume.
Laptọọpụ ndị a haziri maka egwuregwu na-abụkarị ugboro ugboro, ya bụ, igwu egwuregwu. Ọtụtụ n'ime ha nwere ihuenyo 15-inch, ebe ọ bụ na nke a bụ nha ọkọlọtọ na ọ nwere ike ịgụnye elu components ya mere, anyị nwere ike igwu egwu nke ọma na-enweghị iwepụ textures na mmetụta. A na-eji kọmpụta ndị a dị ike karịa kọmpụta nkịtị, n'ime nke anyị nwere RAM ka ukwuu, ndị nrụpụta ka mma, draịvụ ike dị elu na ihuenyo nwere mkpebi ka mma. Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị ka ha na-enwe ike ime ihe ike, na-adọrọ adọrọ karị, na-enwekarị "ọchịchọ", nke a ga-aghọta ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọ bụ kọmputa e mere maka ntụrụndụ.
Ụfọdụ kọmputa inch 15 nwere ihuenyo mmetụ aka. Ọtụtụ n'ime ha na-eji sistemụ arụmọrụ Windows, mana enwerekwa ụfọdụ nwere Linux n'ahịa. Kọmputa ihuenyo mmetụ, ọkachasị ndị na-eji Windows, ekwe ka anyị were ohere nke mmezi nhọrọ, dị ka iji stylus, nke ga-enye anyị ohere ịse ma ọ bụ rụọ ọrụ ụfọdụ, ma ọ bụ jiri ngwa mkpanaka, dị ka egwuregwu. N'ozuzu, mgbakwunye ngwaike nke ihuenyo ga-eme ka ọnụahịa ngwaọrụ dị elu, ọbụna karịa ma ọ bụrụ na ihe anyị nwere n'ihu anyị bụ kọmputa na-agbanwe agbanwe (PC + Tablet).
Laptọọpụ inch 15 nke ị kwesịrị ịzụta ...
Taa, enwere ụfọdụ kọmpụta ndị a na-ebugharị ebugharị n'ahịa na-erughị euro 600. N'ebe a, anyị na-egosi gị nhọrọ kachasị mma, ọ bụ ezie na ndepụta anaghị agbaso usoro ọ bụla akọwapụtara, ebe ọ bụ na ụdị ọ bụla nwere ike na adịghị ike ya.
HP 15 bụ ya Laptop 15 inch dị ọnụ ala, dị gịrịgịrị ma dị mfe na ngwaike Intel karịa ka ị nwere ike nweta taa. N'oge edere post a, enwere nhazi na Intel Core i5 CPU , 16 GB nke RAM na 1 TB nke draịvụ ike SSD dị na ntanetị maka ihe na-erughị € 1000 (ọbụlagodi obere, na onyinye n'okpuru nke anyị na-agbakwunye).
Maka ego ahụ, ị ​​ghaghị ịma na ị ga-enweta a Akpa rọba ojii, ahụigodo dị mma na trackpad, ihe ngosi 1920 x 1080 pikselụ na IPS panel na batrị ga-agafe awa 7 kwa okirikiri chajị. Ihe a niile na aru nke 1,8 n'arọ na 23 mm. oké.
Na nkenke, ụdị abụọ a na-enye ngwaike Intel na ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ maka ọnụ ahịa a na-apụghị imeri emeri. Nhazi ndị yiri nke Asus, Lenovo na ụdị ndị ọzọ na-ere n'etiti 1000 na 1200 euro, ọ bụ ezie na maka ọnụahịa ahụ, ị ​​​​ga-enweta ihuenyo mmetụ, okwu igwe, batrị buru ibu, ihuenyo dị mma na usoro ntụgharị. Ma ọ bụrụ na ihe niile ịchọrọ bụ laptọọpụ dị mfe, dị mfe, dị ike na ọnụ ala, ị gaghị ahụ onyinye ka mma.
Lenovo Yoga 7 dị ka a na-akpọ ya na mpaghara ụfọdụ, bụ a obere mkpanaaka kọnvatịbụl 14 anụ ọhịaN'ezie, ọ bụ otu n'ime ụdị kachasị ọnụ ahịa na udi ya. Enwere ike iji laptọọpụ a dị ka kọmputa nkịtị, ma ebe ọ bụ na ihuenyo nwere ike ịtụgharị azụ ruo ogo 360, a pụkwara iji ya dị ka mbadamba nkume nwere nkwụnye.
Anyị nwalere ụdị nke bụ isi, mana n'ọtụtụ mba, Lenovo na-ere naanị nhazi ihuenyo mmetụ ihu HD zuru ezu, njirimara anaghị enye ya site na ọtụtụ laptọọpụ inch 15 yiri ya. Na mgbakwunye, ihe nlereanya a nwere i7 CPU, nwere 16 GB nke RAM na 1 TB nke diski ike SSD.
Eziokwu bụ na maka ego ahụ ị ga-enweta nnukwu laptọọpụ na-agbanwe agbanwe nwere ihe mkpuchi aluminom, ezigbo keyboard na trackpad, ezigbo nhọrọ ọdụ ụgbọ mmiri, yana batrị 48 Wh.
LEnovo nwekwara ụdị i7 maka ọrịre ya na kaadị eserese Nvidia RTX 3060 nke a na-ere ihe dị ka euro 500 ọzọ. Pịa na njikọ ahụ ka ịhụ nkọwa ndị ọzọ na mbelata enwere ike.
El Yoga 7 enweghị ngwa anya mbanye na na-atụghị anya ya, ụdị ntinye ga-adị ọnụ karịa Yoga 7 ọhụrụ, na ọnụ ahịa na-amalite na 780 euro n'ihe banyere nhazi Intel Core i5 ma ọ bụ na SSD ole na ole.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ego ma nwee ezuru ndị nrụpụta ọgbọ gara aga, ị nwere ike ịtụle ụdị ochie, ọ bụrụhaala na ha ka nọ na ụlọ ahịa ma ọ bụ na ịchọrọ ịzụta ha n'aka nke abụọ.
The Spin 3 akara na-ewe oké ọnụ Ultrabook echiche ọbụna n'ihu, dị ka Ọ bụghị naanị na ọ na-enye ihuenyo mmetụ aka, mana ọ nwere ike ịtụgharị azụ azụ ruo ogo 270, nke na-enye gị ohere iji ya na ọnọdụ ngosi, dị ka ị na-ahụ na vidiyo dị n'okpuru. Agbanyeghị, enweghị ike iji ya n'ụdị mbadamba, dịka ọ nwere ike ịdị na Yoga ma ọ bụ Flip Asus Zenbook nke anyị gosipụtara na mbụ.
Nke a na-ekwu, laptọọpụ Acer dị nnọọ mfe. Ha na-abịa Ngwunye Intel, Core i3, i5 na i7 processors, 4 ruo 8 GB nke RAM, ụdị nchekwa dị iche iche, batrị 48Wh, wdg. Ihe ị na-ekwesịghị ịchọ na ngwaọrụ ndị a bụ kaadị eserese dị ike ma ọ bụ draịva anya. Na mgbakwunye, ihuenyo ahụ, yana panel IPS na 1920 × 1080 pikselụ, dị ezigbo mma.
Ahịrị 15,6 inch dị ihe dịka kilogram 1,7 yana oke 21 mm. Ụdị nwere Core i5 na-efu site na euro 560 na, ọ bụrụ na ịchọrọ nhazi dị ike na Core i7, 8GB nke RAM na 512 GB nke SSD, ọnụahịa ahụ na-aga 800 euro. Ụdị 14-inch dị naanị 1,99 kg ma na-efu ihe dị ka euro 560, n'agbanyeghị na ị nwere ike ịchọta onyinye na ịntanetị.
Ndị a bụ Ultrabooks kacha ewu ewu sitere na HP. Ha dị ntakịrị, 18 mm. nnukwu, nke nwere ụlọ ndị sitere na ngwakọta nke ígwè na plastik. Otú ọ dị, ha dị ntakịrị arọ ibugharị kwa ụbọchị: ụdị 14-inch na-atụ ihe dịka 2,58 kg na 14, 1,6 n'arọ, ya mere ọ dị oke ọkụ. Ọ bụrụ na-amasị gị nke a, ọ bụ maka laptọọpụ nwere ezigbo uru maka ego.
Usoro abụọ a bụ otu n'ọtụtụ ụzọ. Ha abụọ nwere ngosipụta pikselụ 1920 × 1080, ma ọ bụ FHD IPS panel ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịkwụkwu ntakịrị. Ha abụọ nwere otu keyboard na trackpad ma na-enye nhazi 11th Gen Intel dị iche iche ruo 16GB nke RAM..
Enwere ụfọdụ ihe ịma mma dị iche n'etiti abụọ ahụ, Ime ụlọ nke Pavilion 14 bụ nke plastik doro anya, ebe ime 15 bụ nke aluminom. Na mgbakwunye, enwerekwa ọrụ dị iche iche: ụdị Pavilion 15 nwere ọdụ ụgbọ USB ọzọ, ntinye dị iche iche nke ọdụ ụgbọ mmiri gburugburu ahụ, batrị buru ibu (58 Wh vs 43 Wh na 5000). Otú ọ dị, dị ka a tụrụ anya, ụdị ndị dị na ahịrị a dị 50 ruo 100 euro dị ọnụ karịa HP 15 nwere nhazi yiri ya.
N'okwu abụọ ahụ, Ọnụ ahịa na-amalite na 600-700 euro n'ihe banyere nhazi Core i5, 8 GB nke RAM na 1920 × 1080 px ihuenyo., mgbe nsụgharị ndị nwere Intel Core i1000 processors, 7 GB nke RAM na FHD IPS ihuenyo mmetụ na-abata na / ma ọ bụ gafere 16 euro. Ah! Echefula na site na usoro HP Pavilion 15 ị ga-enwe kaadị eserese ka mma karịa nke 14.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ultrabook dị ọnụ ala nke nwere ikike zuru oke iji rụọ ọrụ gị kwa ụbọchị ma ọ bụ ọbụna ịkpọ vidiyo na igwu egwu. na ụfọdụ egwuregwu dị ugbu a, Acer ASPIRE 3 bụ otu n'ime nhọrọ gị kacha mma.
Maka ihe na-erughị 600 euro, ị ga-enweta laptọọpụ 15,6-inch nke dị kilogram 2,5 ma dị ihe dịka 20,32 mm. oké (Ọ dịkwa na ụdị inch 17 buru ibu ma dị arọ.) Na ngalaba na-adịghị mma, anyị ga-ekwu na laptọọpụ a adịghị ele anya ma ọ bụ na-eche na ọ siri ike dị ka Ultrabooks ndị ọzọ anyị kwuru n'isiokwu a, ọ bụ ezie na njedebe dara dị mma karịa nke laptọọpụ ndị ọzọ nkịtị. Mgbe imepere mkpuchi, ị ga-ahụ ahụigodo na trackpad dị mma, n'agbanyeghị na ọ nweghị frills. Ihuenyo anaghị emetụ aka na-egbuke egbuke ma nwee mkpebi nke 1920x1080px.
Otú ọ dị, ihe kasị mma bụ n'ime. Acer ASPIRE 5 nwere Core i5 1035g1 processor, 8GB nke RAM, 512GB nke nchekwa SSD, yana kaadị Intel HD Graphics, nke pụtara na ọ nwere ike ijikwa ọtụtụ egwuregwu n'ụzọ zuru oke, ọ bụ ezie na ọ bụghị na ntọala eserese ndị kachasị elu (ya mere anyị ji akwado ya dị ka laptọọpụ egwuregwu ntinye ọkwa, n'ezie). N'ihe a niile anyị ga-agbakwunye batrị awa 5. Ị ghọtara ihe ịga nke ọma nke ihe nlereanya a, nri?
Na njedebe nke 2020, ụdị nwere ndị nrụpụta ọgbọ nke iri na otu nke akwụkwọ ndetu Acer 11-inch a pụta.. N'okwu a, Acer na-eji ndị nrụpụta kachasị elu dochie kaadị eserese eserese, batrị dị oke nha na ụfọdụ tweaks na nhazi ahụ. Mgbanwe ndị ahụ abụghị nnukwu ihe, ma ha nyeere ụlọ ọrụ ahụ aka ịre ụdị Core i7, na 16 GB nke RAM na 1 TB hard drive, maka ihe na-erughị 800 euro. Ọnụ ego dị ukwuu maka atụmatụ ọ na-enye.
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ inch 15 kacha mma, ebe a bụ ụfọdụ nhọrọ. Anyị na-agụnye naanị Laptop 15 inch na akwụkwọ ndetu wuru na nyiwe Intel ULV. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na laptọọpụ ndị dị ike karị, na ndị na-arụ ọrụ quad-core na kaadị eserese ngwa ngwa, ị nwere ike ileba anya na ngalaba nke raara nye laptọọpụ ndị dị elu nke ị ga-ahụ n'okpuru.
Acer nwere ahịrị kacha elu nke Ultrabooks, Laptọọpụ nwere ngwaike ọgbọ ọhụrụ nke Intel processors, ọmarịcha eserese na kaadị eserese dị mma.
Acer Aspire A515 bụ kọmputa Laptọọpụ inch 15,6 nwere ezigbo ihuenyo IPS zuru oke, ihe nrụpụta AMD Ryzen 5, eserese agbakwunyere, 8 GB nke RAM na draịvụ ike 1TB SSD., ihe niile dị na ahụ igwe na plastik na-eru 2,6 kg na 1,86 cm. n'ebe kacha sie ike. Mbanye ike mediocre bụ ịdọrọ ya mana ọ nwere ike mfe imelite ọ bụrụ na ị chọọ.
Anyị nọ n'ihu onye ọzọ ultrabook dị ọnụ ala nke nwere ike ijikwa egwuregwu nke ọma. Na-arụ ọrụ na processor AMD Ryzen 7, ọ nwere ike iru ruo 16 GB nke RAM ma nwee eserese agbakwunyere Radeon RX Vega 8, nke ga-adaba na arụmọrụ ya na intel graphics uhd
N'ezie, Lenovo Ideapad 3 dị ọnụ ala karịa ọtụtụ kọmpụta nwere atụmatụ ndị yiri ya. Maka euro 300 ị ga-enweta Intel Core i3 processor, 8 GB nke RAM na 500 GB HDD / SSD nwere nchekwa 8 GB. Na mgbakwunye, ọ na-etinye batrị 48 Wh, keyboard na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na ụlọ na-emecha oji nke na-enye ya ọdịdị dị iche iche, dị egwu karịa nke akwụkwọ ndetu ndị ọzọ na ọnụahịa a.
N'aka nke ọzọ, Lenovo agaala maka ihuenyo IPS matte 1920 × 1080 px, nke pụtara na akụkụ nlele na agba dị ezigbo mma.. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihuenyo dị nkọ karị, ị ga-ele anya ebe ọzọ, mana ọ bụrụ na ị nwere enyo zuru oke, Lenovo Ideapad bụ otu n'ime laptọọpụ inch 15 kachasị ike na ọnụ kacha mma gburugburu taa. Soro njikọ dị n'elu maka nkọwa ndị ọzọ wee hụ ọnụahịa kacha mma anyị chọtara na ịntanetị.
14-inch na 15-inch LG Gram
LG nwere ụfọdụ ụdị laptọọpụ inch 15 a ma ama.
LG Gram 14-inch na 15-inch fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, naanị ihe ngosi ha dị iche. Ha abụọ dị ọkụ ma maa mma (ihe dị ka 1Kg) wee bịa na ndị nrụpụta Intel ọgbọ ọhụrụ, ruo 16GB nke RAM, eserese Iris Xe na nhọrọ nchekwa dị iche iche.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, Ha abụọ na-ere ihe dịka 1200 ma ọ bụ 1300 euro n'ihe banyere nhazi ya na Core i7, 16 GB nke RAM na 512GB nke SSD
Atụmatụ ndị ọzọ niile ka dị otu, gụnyere nhazi ngwaike dị.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ kọmpụta 15-inch ndị ahụ nwere njirimara ndị kacha pụta ìhè na ahịa (na ọnụ ahịa dị elu n'ezie), anyị na-akwado ka ị hụ nke a. ntụnyere nke kacha mma.
Uru nke 15-inch vs 13-inch kọmputa
Na ọkọlọtọ ihuenyo nha kemgbe 15 inch kemgbe afọ abụghị ihe ndabara. Kọmputa dị inch 15 nwere nnukwu ihuenyo zuru oke ka anyị nwee ike iji ya rụọ ọrụ ka anyị na-elele ọdịnaya ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị atụnyere ha Laptop 13 inch, ndị nke 15 ″ nwere ihuenyo 2 ruo 2.6 sentimita karịa, dabere ma ihe anyị na-azụ bụ kọmpụta nke dị naanị 15 ″ ma ọ bụ otu nke ọkọlọtọ, nke ihuenyo ya nwere nha diagonal nke 15.6 ″.
Uru nke kọmpụta dị inch 15 karịa kọmpụta 13 inch bụ ndị a:
Ihuenyo buru ibu = arụpụta elu. Ihe mgbakwunye 2-2.6 inch ga-enye anyị ohere ịhụ ọdịnaya ndị ọzọ, nke pụtara na anyị ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, anyị agaghị agbaji anya anyị. N'ebe a kwa, ọ dị mkpa ịtụle mkpebi, mana ihe niile hà nhata, laptọọpụ 15 "nwere ike igosipụta ọdịnaya karịa laptọọpụ 13".
Ngwa ndị ka mma. Ozizi ahụ na-agwa anyị na ihe ndị buru ibu na-adaba na oghere buru ibu nakwa na akụkụ buru ibu ga-adị ike karị. Enwere ike imezu nke a, na n'ezie ọ na-emezukarị, mana ị ga-elele nkọwapụta anya nke ọma n'ihi na anyị nwere ike ịhụ kọmpụta 15 ″ nwere ihe ndị ọzọ dị ntakịrị ma ọ bụ ụfọdụ kọmpụta 13 ″ dị ike.
Nnwere onwe ka ukwuu. N'ime akụkụ kachasị ukwuu nke enwere ike itinye na kọmpụta 15 inch anyị nwere batrị ka ukwuu. Ọ bụ ezie na batrị abụghị naanị ihe dị mkpa na nke a, na nha nha ọnọdụ, nke nwere batrị kacha ukwuu ga-enye nnwere onwe ka ukwuu.
Nọmba ọnụọgụ. Laptọọpụ inch 13 na-agbakọ karịa, na mbelata nha na-achụkarị akụkụ nke ahụigodo. Ihe ndị ọzọ nke ahụigodo na-ejigide nha na iji nweta nke a, ha ewepụla igodo ndị dị na laptọọpụ 15-inch.
Uda ka mma- Ọ bụ ezie na, dị ka ihe ọ bụla ọzọ, nke a nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu, ihe ndị ọzọ niile hà nhata, akwụkwọ mpịakọta buru ibu ga-agụnye ndị na-ekwu okwu buru ibu, nke ga-eme ka ụda dị elu dị elu.
Dị ka ihe na-adịghị mma, anyị ga-eburu n'uche na kọmputa buru ibu ma dị arọ ga-efu ihe dị ukwuu iji bufee, n'ihi ya, ọ gaghị abụ nhọrọ anyị ma ọ bụrụ na anyị na-aga na-ebugharị ya mgbe niile.
15-inch vs 17-inch laptọọpụ
N'agbanyeghị na ọkọlọtọ nha bụ 15 inch, enwekwara nnukwu akwụkwọ ndetu. Ndị nwere ihuenyo kachasị taa bụ laptọọpụ nke 17 sentimita, nke ruru sentimita 2 karịa nha ọkọlọtọ. N'ụzọ ezi uche dị na ya, enwere uru dị na adịghị ike, dịka ndị a:
Ihuenyo buru ibu bụ otu ihe ibu ibu. Ka kọmputa buru ibu, ka ọ na-adị arọ karị. Ihe niile hà nhata, laptọọpụ 17-inch ga-atụ ihe karịrị inch iri na ise.
Ihuenyo buru ibu na-abụkarị otu mma di elu. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu, kọmpụta nwere ihe ngosi 17 inch ka emebere maka ndị ọrụ chọrọ. Ndị na-achọ kọmputa nwere ihuenyo 17-inch na-achọ ọrụ imewe, igwu egwuregwu ma ọ bụ rie ọdịnaya na ihuenyo buru ibu nke nwere àgwà dị elu, ya mere ọ dị mfe ịchọta ọtụtụ 2K ma ọ bụ 4K.
Ngwa ndị ka mma, nke gụnyere nnwere onwe ka ukwuu. Ihe ndị ọzọ niile nhata, kọmpụta 17-inch kwesịrị inye nnwere onwe ka ukwuu n'ihi na ha nwere ohere ịnabata batrị buru ibu. N'aka nke ọzọ, e nwere obere kọmputa 17-inch nwere obere ihe mejupụtara ya; ha na-agụnyekarị ihe ndị dị n'elu-nkezi.
Kedu ihe kwesịrị ịnwe ezigbo laptọọpụ inch 15?
I5 ma ọ bụ i7 processor
Ọ bụ ezie na onye ọ bụla nwere ike ịchọ otu ihe, ezigbo laptọọpụ 15-inch kwesịrị inwe opekata mpe otu Intel i5 processor. Ọ bụrụ na ị jụrụ m "Gịnị kpatara?" M ga-aza gị ozugbo na n'ihi na m zụtara otu nwere i3 na-eche na ọ ga-ezuru ide ederede na m na-ezighị ezi. Imepe faịlụ ọ bụla ma ọ bụ mmemme na-ewe m ruo mgbe ebighị ebi ma echere m na m bụ nnọọ ihe ọjọọ. I5 na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ dịkwuo mma, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ n'ụzọ dị mma karị, nke kachasị mma bụ. họrọ onye nwere i7 ma ọ bụ ihe dakọtara, dị ka AMD ryzen 7. Ndịiche si a i3 ha dị abysmal.
Agbanyeghị na i7 karịrị nke ukwuu maka ọtụtụ ọrụ, anyị nwekwara ike zụta ihe nwere “ụbụrụ” ka mma, dị ka laptọọpụ na i9 processor ma ọ bụ ihe nhata. Ọ dịghị mkpa, n'ebe dị anya site na ya, maka ọtụtụ ọrụ, ma ọtụtụ ndị egwuregwu a ma ama na-ahọrọ maka nhazi a, n'etiti ihe ndị ọzọ na-enye ha ohere igwu egwu na iyi na-enweghị enwe obere nsogbu.
Ngosipụta Full HD
Ozugbo ị na-anwale ihuenyo Full HD, ị chọghị ihe ọ bụla ọzọ na ị gaghị aghọta otú ị na-enwe ike na-arụ ọrụ na obere. nwere a Mkpebi 1920 × 1080 pikselụ, na ihe dị iche n'ihe banyere HD bụ abysmal. Ihe mbụ anyị na-achọpụta mgbe anyị na-agbanye ihuenyo bụ na ihe niile dị mma, dị mma, anyị na-achọpụta na ọ bụ ụwa ọzọ, ma ihe kacha mma bụ na, ọ bụrụ na anyị nwere anya nke ọma, anyị nwere ike itinye ya na mkpebi zuru oke ma hụ ihe ndị ọzọ. ọdịnaya. N'ezie, ọ bara uru. Ma ọ bụ na laptọọpụ m nwere i3 nwekwara obere mkpebi yana ... nke ọma, ọ dịghị mma.
Ezigbo laptọọpụ inch 15, ma ọ bụ nha ọ bụla, ga-enwe SSD diski. Ịgụ / ide ọsọ dị elu karịa, ya mere, ihe niile ga-adị ngwa ngwa, site na imeghe mmemme na akwụkwọ iji malite usoro ọrụ.
Nhọrọ ọzọ bụ ịzụta kọmpụta nwere diski ngwakọ, nke nwere akụkụ dị ala na SSD yana onye ọzọ nwere ikike dị elu na HDD. Disk ndị a dị ka sistemụ arụmọrụ na data anyị na-ejikarị na-etinye n'ime akụkụ SSD (ọ na-emekarị ya na-akpaghị aka), nke ga-eme ka a na-eji ya eme ihe kwa ụbọchị ngwa ngwa, yana ozi ndị ọzọ anyị na-etinye na ya. HDD disk , nke na-eji nwayọọ nwayọọ, ma dịkwa ọnụ ala na n'ime ha anyị nwere ike itinye ihe niile dị anyị mkpa.
Ezigbo Laptọọpụ inch 15 kwesịrị inwe ezigbo nnwere onwe. Kọmputa "laptọọpụ" abaghị uru ma ọ bụrụ na anyị agaghị enwe ike isi n'ọdụ ụgbọ mmiri pụọ ruo ọtụtụ awa. Ezigbo nnwere onwe bụ ihe na-enye ohere ka kọmputa bụrụ ọ dịkarịa ala awa 5 na-enweghị ịchaji ya, mana enwerekwa kọmputa nwere nnwere onwe kacha mma na-abịaru nso na ọbụna gafere awa 10. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ihe a na-ahụkarị, ọ dabere na sistemụ arụmọrụ ma ọ bụrụ na ejiri usoro nchekwa ike mee ihe, nke gụnyere iji obere nchapụta, ma ọ ga-ekwe omume.
Ezigbo laptọọpụ, ma ọ dị sentimita 15 ma ọ bụ nha ọ bụla ọzọ, aghaghị nwee ike ịkparịta ụka ma ọ bụ jikọọ na mpaghara ndị ọzọ ma ọ bụ otu. Ya mere, ọ ga-adabarịrị na Bluetooth, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume 4.x dịka opekempe. N'aka nke ọzọ, WiFi kaadị ga-akwado ọhụrụ ogbugba ndu, dị ka WiFi (802.11a / b / g / n / ac) na imekotaotuugbo dual band (2,4 na 5GHz). N'ihe gbasara WiFi, 2.4GHz nwere oke dị ukwuu ma na-agafe mgbidi, mana ọsọ dị ntakịrị (anyị agaghị erute 100MB), ebe 5GHz bụ maka oghere na obere oghere, mana anyị ga-eji ọsọ ọsọ niile.
N'aka nke ọzọ, ọ dịkwa mkpa ịṅa ntị na ọdụ ụgbọ mmiri na, ma ọ dịkarịa ala, ha ga-enwe di na nwunye. USB Ụdị-A ọdụ ụgbọ mmiriA na-atụ aro ka ị nweta ma ọ dịkarịa ala otu Ụdị-C, HDMI iji jikọọ ya na onye na-ahụ maka mpụga na onye na-agụ kaadị, nke ga-enye anyị ohere ịgụ MicroSD nke ngwaọrụ dị ka igwefoto mkpanaka.
Nleta nke laptọọpụ inch 15
Mgbe anyị na-ekwu maka nha kọmputa, anyị ga-adabere naanị na naanị n'otu isi ihe: ihuenyo ya. Ọkpụrụkpụ na oke ga-adabere na ezigbo ọrụ nke onye nrụpụta na-arụ, mana nha ihuenyo anaghị agbanwe agbanwe. Ihuenyo 15-inch ọkọlọtọ bụ n'ezie 15.6 sentimita asatọ, nke bụ 39.62cm ogologo. N'ezie, ha tụrụ 19.5cm na kehoraizin 34.5cm.
Anyị aghaghị iburu n'uche ụdị ihuenyo dị n'ihu anyị, ya bụ, akụkụ ya. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ihuenyo dị na ahịa, ma laptọọpụ na telivishọn, nwere a ntụpọ 16:9 panoramic. A ghaghị ịkọ nke a ma ọ bụrụ na anyị achọta ihe dị iche iche nke laptọọpụ nwere ihuenyo 4: 3: a ghaghị ịnọgide na-enwe diagonal, ma ịdị elu na obosara ga-adịgasị iche.
Ụdị laptọọpụ inch 15 kacha mma
Akpa nwere ike ibugharị CASEZA...
HP bụ akara ama ama na ụwa nke kọmpụta, n'agbanyeghị na akụkụ nke aha ya bụ n'ihi ndị na-ebi akwụkwọ ya. Ha malitere dị ka Hewlett-Packard ihe karịrị afọ 80 gara aga, mana emechara nweta ewu ewu maka nrụpụta na ire ere. kọmputa ụdị nile.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, na ya HP akwụkwọ ndetu katalọgụ Ha enweghị ike ịtufu laptọọpụ nha ọkọlọtọ, nke bụ laptọọpụ 15 ″, ma ọ bụ kọmpụta kọmpụta 15.6 ″ karịa. N'agbanyeghị na ha mehiere n'oge gara aga, HP bụkwa akara ọzọ iji tụlee ma anyị chọrọ ịzụta kọmputa inch 15 ma ọ bụ ụdị laptọọpụ ọ bụla ọzọ.
Acer bụ akara nke ọtụtụ ndị ọrụ, gụnyere ihe nkesa, na-amasị, karịsịa maka laptọọpụ ha. N'ozuzu, a haziri kọmpụta ha nke ọma ma mee nke ọma, nke anyị ga-achọpụta nke ọma ozugbo na igbe wee malite iji ha. Na katalọgụ ya, anyị nwere ike ịhụ kọmpụta dị iche iche, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nwere ezigbo uru maka ego. N'usoro ya Chọta Ha na-enye ụdị dị iche iche, yana ụdị sitere na 10.1 ″ ruo ụfọdụ 17 ″. Acer bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma mgbe anyị na-achọ ezigbo kọmpụta na-akwụghị nnukwu ego, ihe dịkwa irè ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ kọmputa 15-inch.
Asus bụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche na-arụpụta ma na-ere ngwa elektrọnik, robotics na ngwa ngwa, n'ime nke anyị nwere ụdị akụrụngwa dị n'ime na kọmpụta niile. N'ime laptọọpụ ha, olee otú ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, ha na-enye ọtụtụ 15-inch, nke na-abụghị ihe ijuanya ma ọ bụrụ na anyị na-atụle na ọ bụ ọkọlọtọ size.
Na katalọgụ gị enwere ụdị kọmpụta niile, nke gụnyere laptọọpụ inch 15 nwere ihe ndị dị elu karịa ma ọ bụ ụfọdụ nwere uche. N'iburu n'uche na ọ bụ ụlọ ọrụ na-enye ọnụ ahịa dị mma, ọ kwesịrị ịbụ nhọrọ iji tụlee mgbe anyị chọrọ inweta kọmputa 15-inch ma ọ bụ nha ọ bụla ọzọ.
Lenovo bụ ụlọ ọrụ China pụrụ iche, karịa ihe niile, na ngwaọrụ eletrọnịkị smart (ekwentị mkpanaka, elekere, mbadamba ...) na kọmputa. Dị ka ụlọ ọrụ China, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ọ na-enye na-eme na ezigbo ego, nke na-adịghị ekwekọ mgbe niile na ezi uche ma ọ bụ adịghị mma.
Na katalọgụ ya, anyị ga-ahụkwa Laptọọpụ Lenovo ụdị ọ bụla, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nwere ọnụ ahịa dị mma, gụnyere ụfọdụ akụrụngwa dị ala na ndị ọzọ siri ike, gụnyere ụfọdụ maka egwuregwu.
Ngwá ọrụ ha dị ọnụ ala dị ọnụ ala n'ezie, mana anyị ga-eburu n'uche na ọ bụrụ na anyị họrọ otu n'ime ngwaọrụ ndị a, ihe anyị ga-azụta bụ ngwaọrụ nwere ikike ziri ezi. N'ịtụle ụdị dịgasị iche iche ha na-enye, ọ bara uru iburu ha n'uche mgbe anyị na-achọ kọmputa 15-inch.
LG Corporation bụ ụlọ ọrụ sitere na South Korea na-arụpụta ngwaahịa eletrọnịkị, ekwentị mkpanaaka, na petrochemicals. N'ime ngwaahịa eletrọnịkị anyị na-ahụkwa laptọọpụ na, kedu ka ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, ọtụtụ n'ime ha dị sentimita 15, nha ọkọlọtọ maka ụdị akụrụngwa a.
na LG laptọọpụ A na-ahazikarị ha nke ọma ma jiri ego akpọrọ ihe, mana ọ bụghị na-emekarị rụpụta akụrụngwa dị akọ nke na ọ ga-eme ka anyị kwaa ụta ma ọ bụ enweghị obi ụtọ mgbe azụrụ ya.
N'ime ụdị kọmpụta ya dị iche iche, anyị nwere ụdị dị iche iche, n'etiti nke gram ya pụtara, nke bụ laptọọpụ na-enwekarị ihuenyo inch 15.6 na ụfọdụ n'ime ha na-emetụ aka. N'otu usoro a, anyị ga-ahụkwa kọmpụta dị inch iri na ise dị oke mkpa, yabụ na ha bụ nhọrọ anyị ga-atụle mgbe anyị chọrọ ịzụta ezigbo kọmpụta, n'agbanyeghị nha na ịdị arọ nke masịrị anyị.
Okwu ikpe 14-15.6...
Msi bụ ụlọ ọrụ na-echepụta, na-emepụta ma na-ere ngwaike kọmputa, gụnyere laptọọpụ, desktọpụpụ, nne nne, kaadị eserese, kọmputa niile n'ime otu (AIO), sava, na mpụta.
Na katalọgụ ya, anyị nwekwara ike ịhụ ụdị kọmpụta ọ bụla, mana ọ na-ahụkarị ọtụtụ emebere maka egwuregwu. Nke a pụtara na ọtụtụ n'ime MSI laptọọpụ Ha nwere ihe ndị ọzọ dị elu nke ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ otu n'ime ahụmịhe kachasị mma na egwuregwu vidiyo, na-enweghị jerks, na oke ọsọ ọsọ na-enweghị iwepụ textures ma ọ bụ mmetụta. Anyị nwekwara ike ịhụ kọmpụta ndị ọzọ nwere uche, yabụ na ọ bụ akara anyị kwesịrị ịtụle mgbe anyị gara ịzụrụ kọmpụta dị sentimita iri na ise.
Mkpebi gbasara laptọọpụ inch 15
Ndị a abụrụla kọmpụta inch iri na ise kacha pụta ìhè nke anyị nweburu ike nyocha. Onye ọ bụla nwere njirimara pụrụ iche ya mere nhọrọ gị ga-adabere n'ihe ị na-achọ. Anyị na-etinye njikọ ndị ọzọ nke ga-aba uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ laptọọpụ akọwapụtara nke ọma.
Laptọọpụ dị ọnụ ala: Maka ire ere maka ihe na-erughị euro 500, ma buru n'uche na ị ga-enwe ohere ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị kpebie otu n'ime ha, ị nwere ike ịhụ ha na isi ibe anyi.
Laptọọpụ dị n'etiti: Maka ire ere maka ihe na-erughị euro 1000 na enye a uru kachasị mma maka ego.
Akwụkwọ ndetu dị elu maka azụmaahịa, mgbasa ozi na egwuregwu: Ha bụ laptọọpụ kacha mma na ahịa. Ọ bụrụ na ịchọrọ atụmatụ dị elu, arụmọrụ kachasị mma, na njirimara kachasị ọhụrụ, ndị a kwesịrị ịbụ nhọrọ gị. Maka azụmahịa mgbe ị na-eme njem anyị na-akwado ndị obere akwụkwọ Chrome mgbe maka egwuregwu anyị na-akwado nke a.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Size » Laptop 15 inch